Ny fipoahana votoaty marketing | Martech Zone
Ny fipoahana votoatin'ny marketing
Zoma, Febroary 10, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny sampana marketing sy varotra dia nanao marketing votoaty hatrany… mora kokoa ny mivarotra ny entanao rehefa nanana fijoroana vavolombelona momba ny mpanjifa ianao, whitepapers, fandinihana tranga, mailaka ary antontan-taratasy hafa hanampiana ny fanabeazana ny mpividy. Izao izany atiny izany dia azo karohina sy azo zaraina tamin'ny alàlan'ny tranokala anefa, tsy maintsy namorona karazana anarana isika… Content Marketing. Satria ny mpividy dia omena fahefana hitady ny vaovao, ny marketing amin'ny atiny dia manan-danja satria ny atin-takelaka dia tokony ho hita ao amin'ny fikarohana sy ao anatin'ny tambajotran'ireo izay mitady.
Ny orinasa amin'ny habe rehetra dia manomboka mahatsapa fa tsy tokony ho tafiditra ao anaty paikadim-bola henjana amin'ny drafi-barotra. Na ireo orinasa lehibe toa an'i Coca-Cola aza dia mandrotsaka ny zava-drehetra amin'ny paikady atiny tafiditra. Amin'ny alàlan'ny lahatsoratr'i Bluegrass
Fahafahana sy valiny PR amin'ny Internet